UThomas Dekker Ugadla I-Psychological Horror Gold nge "Jack Goes Home" - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UThomas Dekker Ushaye Igolide Elihlazisayo Lokwesaba Ngegolide elithi "UJack Uya Ekhaya"
UThomas Dekker Ushaye Igolide Elihlazisayo Lokwesaba Ngegolide elithi "UJack Uya Ekhaya"
by Waylon Jordan October 12, 2016 576 ukubukwa
UJack Uya Ekhaya kuzwakala njengesihloko samahlaya othando noma idrama ezwa kahle ngohambo lwendoda olubuyela ezimpandeni zalo ukuze luzithole. Lapho efika lapho, uzothola iqembu labantu abamthandayo futhi abafuna ukukhulisa amaphupho akhe futhi bamsize abe uhlobo oluhle kakhulu kuye angaba yilo. Ngenye yalawo mafilimu akushiya uzizwa ujabulile futhi ugcwalisekile lapho amakhredithi eqhubeka.
Leyo HHAYI ifilimu eyenziwe nguThomas Dekker. Esikhundleni salokho, njengawo wonke lo msebenzi wobuciko olimaza ngokwengqondo, isihloko siyindlela yokukhohlisa.
Njengoba ifilimu ivula, uJack Thurlowe (uRory Culkin) ubhekisisa impilo yakhe yansuku zonke lapho ethola ucingo. Abazali bakhe babe sengozini yemoto. Ubaba wakhe wabulawa, kepha umama wakhe (owadlalwa nguLin Shaye ongenakuqhathaniswa), yize wayenamaqhubu nemivimbo, usindile. Ngokushesha usendleleni eya ekhaya ukuyonakekela unina nokwenza amalungiselelo omngcwabo kayise. Yiso isikhathi lapho inkathazo yakhe iqala khona impela.
Okulandelayo ukuhamba kancane kokushiswa kokudlule njengoba uJack ehlangana ubuso nobuso nemicimbi kusukela ebuntwaneni akade ayicindezela. Njengoba amaphupho akhe amabi eqala ukuhlasela iqiniso lakhe, umhlaba wakhe uphenduka ngokungalawuleki.
UCulkin unikeza ukusebenza okugqamile ngokugqamile njengoJack, eluhlaza futhi osengozini njengoba i-psyche yakhe ivezwa obala. Isambulo ngasinye esizayo siyamshintsha kanti umlingisi ubhalisa lolo shintsho emzimbeni wakhe wonke. Angiqiniseki ukuthi ngake ngabona uCulkin enza ukusebenza okungcono. Enginesiqiniseko ngakho ngemuva kokubuka le filimu ukuthi singalindela ukuthi azobe ehola phambili kaningi ngokuzayo. Akagcini ngokuba nethalente elimangazayo, kodwa unalelo khono azalwa nalo lokuyenga izilaleli zakhe ukuba zilandele yonke iminyakazo yakhe esikrinini.
Futhi-ke, kukhona uLin Shaye. UShaye unguMeryl Streep wezwe elihlasimulisa umzimba futhi uyakufakazela lokho, ukuthi ungamandla okubalwa naye endimeni kaTeresa, unina kaJack. Umzuzwana nje ungumama osengozini futhi onothando kuthi ngokulandelayo abhoke ngolaka nangodlame. Ukuthi ukwenza kanjani lokho ngokukholwayo futhi kubonakala sengathi kulula kangako kumangalisa njengowesifazane amdlalayo.
UDekker uqeda ukulingisa nenqwaba yabalingisi abanethalente nabalingisi. UDaveigh Chase (aka Samara ku Indandatho) kukhanya endimeni yomngani omkhulu kaJack, kanti nabasekeli bakaLouis Hunter bangumakhelwane kaJack ongumakhelwane kamakhelwane ongahle abe nezisusa ezimbi. Bheka eduze futhi uzobona uNikki Reed kusuka kufayela le- Twilight i-franchise kanye nesitatimende sakhe sakamuva njengoBetsy Ross kuFox's Ulele Oze.
Kepha lonke lelo talente lizophela ize ngaphandle komsebenzi omangalisayo ekusithekeni. Isikripthi nesiqondisi sikaDekker kugcina izethameli ziqagela, zingalokothi zinikeze isisekelo esiqinile sokuma. Ngobuqili usisusa kokungokoqobo siye ekukhohlisweni futhi abuye futhi njengezicucu ku-chessboard. Ukwesatshiswa kule filimu kungokoqobo, futhi okubi kunakho konke, akunakuphepheka.
Kuhambisana nesikolo sikaCeiri Torjussen esethusayo kanye nesinemaji yesitayela sika-Austin F. Schmidt, le yifilimu eyodwa ongafuni ukuyiphuthelwa.
UJack Uya Ekhaya kukhishwa kumabhayisikobho nakuVOD Okthoba 14, 2016 kusuka Momentum Izithombe. Hlola ukufakwa kuhlu kwakho kwasendaweni bese ubona le filimu ASAP! Le movie i-roller coaster eyodwa engokomzwelo efanelekile ukugibela.